Dunchurch Park Hotel ayaa xiran habeenimadii: Ma jiro taleefan, ma jiro degel
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hotelada & Dalxiiska Wararka » Dunchurch Park Hotel ayaa xiran habeenimadii: Ma jiro taleefan, ma jiro degel
Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Shirarka • News • Aroosyada Jaceylka Malabka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka UK • Wararka kala duwan
Hotelka Dunchurch Park
Hotelka Dunchurch Park ee Dunchurch, oo ah tuulo weyn iyo kaniisad madani ah oo ku taal duleedka koonfur -galbeed ee Rugby ee Warwickshire, England, ayaa baajiyay dhammaan joogitaankii habeenka, aroosyada, iyo dhacdooyinka horay u socda.
Habeenkii, khadadka taleefanka hoteelka waa la xiray, sidaa darteed ma jirto hab lagula xiriiri karo hoteelka ha ahaado marti ama warbaahin.
Websaytka hudheelka waa la damiyey - waa iska dhammaatay; ma jiro farriintii ugu dambaysay ama sharraxaadda martida ama dadweynaha.
Hoteelka ayaan wali soo saarin wax war ah oo sharxaya xiritaankan deg dega ah ama waxa sababay.
Dhammaan hudheelka Dunchurch Park ayaa la xaqiijiyey inuu weli shaqaynayo oo uusan gelin qaadistii ama maamulkii.
Afhayeen u hadlay baraha bulshada horaantii toddobaadkan ayaa yiri: “Si dhaqso leh, Hotel Dunchurch Park uma furna dadweynaha guud, ama ma awoodo inuu fududeeyo aroosyada ama dhacdooyinka. Si kastaba ha ahaatee, waxaan shaqayneynaa muddadan waxaanan cadeyn karnaa inaanan ku jirin qaabilaada ama maamulka.
“Dhanka kale, waxaan si kal iyo laab ah uga raaligelinaynaa dhibka ay tani keeni doonto; wixii walaac ah ama su'aalo ah ee ku saabsan saamaynta xidhitaankeenna waa in lagu soo diraa emayl [emailka waa la ilaaliyay] halkaas oo xubin ka mid ah kooxdeena uu ku farxi doono inuu kula soo xiriiro soo laabasho. ”
Farriin isku mid ah ayaa lagu dhajiyay Koontada Hotelka Dunchurch Park ee facebook. Waxay u muuqataa in la dhajiyay 2:05 am. Qoraalka hoostiisa hoteelku wuxuu u kala saaray booskiisa: “Dunchurch Park Hotel xaddidan yaa ka faalloon kara qoraalkan,” kaas oo kaliya loola jeedo, runtii ma rabaan inay cid u jawaabaan.
on the England bogga facebook -ga ee hoteelka, waxaa jira codsi ka yimid ballan -qaade martida martida ah oo quus ah:
“Helo ????? Waa maxay sababta uusan qofna noo sheegin buugaagta arooska wax ???? Cmon dunchurch. Nin yahow oo noo sheeg waxa socda. ”
Wararka xanta ah ee ku saabsan xiritaanka degdegga ah ayaa ah markii hal qof uu ku jawaabay: “Waxaa la ii sheegay inay qaxooti badan ku qaateen deeq ay dowladdu siisay, tani waxay ku timid shaqaale. Waxay heshiis 12 bilood ah la galeen dawladda qaxootiga. ”
Qoraalka hoteelka ee ah in su'aalaha emayl loo soo diro si xubin ka tirsan kooxdooda “uu ugu farxi doono inuu kula soo xiriiro,” sax ma aha. Mid ka mid ah isticmaaleyaasha facebook ayaa weydiiyay haddii uu jiro qof wax jawaab ah ka helay farriinta taleefanka ama emaylka, isagoo qoray: "Isku dayay wicitaan iyo emayl mar kale maanta - weli waxba ma jiraan - ma jirtaa cid nasiib u heshay hoteelka?"
Jawaab kasta lama xaqiijin wax jawaab ah iyadoo hal jawaab ay tahay: “Nasiib naguma laha. Waxaan emayl u dirnay, ugu yeernay layn kasta oo suurtogal ah waxaanan isku daynay isku -duwahayada mana jirto wax jawaab ah ama cusboonaysiin ah. … Rajo kama qabo cusboonaysiinta illaa toddobaadka soo socda ayaan rajeynayaa. Haddii ay ku saabsan tahay aroos, waxaan la xiriiri doonaa qaar ka mid ah alaab -qeybiyeyaasha Dunchurch, maadaama aan ku guuleystay inaan ka helo macluumaad iyo taageero ka badan inta aan haysto goobta ama shaqaalaha hoteelka! ”
Way qarsoon yihiin.
martin marshall wuxuu leeyahay,
September 5, 2021 at 10: 51
Salaan waxaan halkaan ku joognaa madadaalo fardaha waalida ah oo laga helay buugga wajiga oo ah in la baajiyay dhammaan aroosyadii aan ballansanaynay. Waxaan la joognay DP muddo 8 sano ah waana sida ay ula dhaqmaan qof walba Ma faraxsani. waayo waxaa jira maalin khaas ah